QURBA JOOG IYO QALBI DHOOF RABA FILM
Marka weydiintu waa haddii madaxdii ku xulan tahay qaab beeleed maamullada kale maxaad ka filan?. Aan si kooban idiinkugu dul maro heerka ay Soomaalidu ka gaarsiisnayd hab-wada dhaqanka xeerbeegtigu salka u yahay, halkuu maanta marayo iyo sababaha ugu waawayn ee dhulka ku dhigay. Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo xiligaa ahaa gudoomiyaha baarlamaanka DFKMG ah,ayaa waxaa uu shir ku qabtay caasimadda Kenya ee nairobi Golahii baarlamaanka ee xiligaa jirray ayaa isku raacay in aan la keenin ciidamo shisheeye dalka iyadoo ay soo xaadireen xildhibaan waxaana diiday xildhibaan in la keeno ciidamo shisheeye dalka, sidoo kale waxaa ogolaaday 55 xildhibaan. Soomaalida dhibta maamulka ka haystaa waxaa wali isaga darsan: Dhamaan magacyadaa oo weli qaar ay Soomaalidu isticmaasho sida marka ay ku leeyihiin: Maanta raggii ay is ku jaalka ahaayeen awoodda maamul waxaa ku haray rag fara ku tiris ah.
The Somali Republic was founded in from territory contained in the colony of Italian Somaliland and the British Somaliland, in , after nine years of democratic government, Somali military officer major general Mohamed Siad Barre seized power via a military coup and declared Somalia a socialist state. Sidey noqotaba waa arrin culus oo tilmama badan oo aan fiicnayn ka bixineysa Muslimiinta, gaar ahaan Soomaalida iyo dadkeeda iyo Dawladeeda. Waa weydiimo u baahan qoraal gaara. Indhagashiga iyo baarka inta u dhaxaysa isaga fiiri sida caadada kuu ah, marka aad wax si fiiro leh u fiirinayso amaad u kuurgalayso. Dhalinyaradu waa laf dhabarta Bulshada, Dhalinyaradu waa Madaxdii Barri, Dhalinyradu waa Ragga Ummaddu ku tashanayso, erayadaas iyo kuwa la mid ah ayaan Had iyo Jeer, Habeen iyo Dharaar maqalnaa, erayadaas oo muujinaya ama ku tusaya ammaan xad dhaaf ah oo loo jeedinayo ama lagu maamuusayo Dhalinyarada, iyadoo dabcan looga jeedo guubaabo iyo kicin lagu tusayo Dhalinyarada xilka sugayo iyo kaalinta looga fadhiyo, loona baahan yahay inay ka soo dhalaalaan una gutaan sida ugu habboon. Nabigaagana ku Sali, waxba heyla dagaalin, hana caroonin. Haddaba hoos ka daawo jawaabta Maryan qaasim.
Maalmaha fasaxana waxaad horey u qaadataa calanka maamulka beeshaada, oo adigoo xadreysan ayaad beesha heeso iyo suugaan u tirisaa! Sanadkii ayaa waxaa loogu baaqay heshiis xabad joojin ah labadii dhinac ee dagaalamayay, waxaana soo abaabulay heshiikaas hay,adii ammaanka ee qaramada midoobay hase yeeshee waxay qabqablayaashii ku heshiin waayeen sidii loo maarayn lahaa heshiiskaas, dhibaatadii waqtigaas ku billaabatay umadda soomaaliyeed ilaa hadda waa ay ku socotaa ayadoo aan la arag wax soo Hagaagay in lasii hungoobo maahini.
Habaar hadduu wax qabanayo Sheekhuu wax u tari lahaa, markaas baan ku iri: Waa qorshaha ama siyaasadda uu gumeystaha ku balaarsado in uu ku xukumo dal iyo dad aan kiisa aheyn, si ay gacantiisa ugu sii jiraan oo aanay madaxbanaani u helin. Aan kuu tusaaleeyo beelaysigee ila soco. Coming Soon Waan dhaqanayaa by Abdullahi Hashi.
Sidaan wada ogsoon nahay Nidaamka lagu saleeyey Qaranimada dalkeena waa mid Federaal ah macnaha ereyga Federal asalkiisu waa Giriig macnihiisuna yahay: Dumarka somalida waxay noqdeen 20 sano ee la soo dhaafay laf dhabarka dhaqalaha wadanka. Labada Shabeelle waxaa ka aloosan dagaallo beeleed halkii maamul dhisid loo jeesan lahaa, iyagu kii beelaysiga ahaa xitaa ma haystaan, oo waxaa la jooog in hoobiyaha la isku hoobiyo.
Xukuummadda oo adeegsaneysa xildhibaanno aan la fahmi Karin sababta ay wakiillo ummadeed ama xildhibaanno uu yihiiin oo waliba qaarkood loo hanweynaa inay noqon dyoof hogaamiyayaashii berito sida Marwo Fowsiyo Xaaji Adan oo aan ku dboof inay tahay waddaniyad ka xanuunsatay dhoofinta walaalkaas qiimaha badan ee Qalbudhagax ayaa mooshinka xoog u wada.
Qurba Joogta iyo Qalbi dhoof raba by Hooyga Beesha kaliya ee heli karta 2 gobol oo nadiif ah waa Digil iyo Mirfle, Gobolada Bay iyo Bakool, inkastoo beeshu wax jkog degto gobolo kale, Haddana waxey noqonaysaa in dawladda lagu dhisi doono Dastuurkaas ay noqoto in Beelaha Digil iyo Mirifle iyo Majeerteen ay isku miisaan yeeshaan iyaga oo aan isku miisaan ahayn nidaamka 4.
Bar Ama Baro – SOMALI INTELLECTUALS WITHOUT BORDERS
For instance, before the military regime, Gedo Region, major part of the current Jubbaland was part of Alta Juba. Waxaana halkaas ku dhintay kumanaan iyo kumanaan shacab ah,oo aan loogu aaba yeelin dagaalkii u dhexeeyay qabqablayaashii gudaha joogay iyo kuwii daaha gadaashisa ka hagayay sida waddamada shisheeye, waddamada deriska iyo hay,adhii kale waxa lagu sheegu beesha caalamka.
Beelaha tiro ahaan la eg ama ka badan Beesha Majeerteen oo aan heli doonin Dawlad goboleedyada Dastuurkaasi Xambaarsan yahay waxaa ka mid ah: Waayo bey yiraahdeen haddii doorashada aanay noqon mid loo wada dhan yahay, in aay adkaan doonto in la helo xal waara oo isku soo dhaweeya ummada Soomaaliyeed ee hadda kala irdheysan.
Dadka iyo dalka waxaa dhexdurduraya sidii daad iyo dabaylana ugu soo rogmanaya aragtiyo diimeedyo iyo kuwo kale. Some Somali politicians advocate basing the jjoog process on the 4.
For a long time Somalia was ruled by successive corrupted civilian governments and military dictatorship, until at the end the military regime collapsed and brutal civil war erupted throughout the country.
Dilm wareysi filim cusub qurbo joog qalbi dhoof raba by baafo australia Madaxda Muqdisho ayaa xooga saaray sida hab qabiil wax loogu dooran lahaa, waxeyna dantoodu ahayd in aqalka hoose oo soo dooranaya madaxweynaha dalka lagu soo xulo iyoo beelaha. Qabyaalad iyo Dagaal Diimeed. Film Cusub Qurba Joogta iyo Qalbi dhoof raba by Mudane Gaas shaqsi ahaan waa nin af gurracn, aan codkar ahayn, hadalka dadka deeqsiin karin, ku caan ah jaajaalaynta iyo weedho jaban, sidaa waxaan u leeyahay laba middood, oo kala ah: Ugu dambeyntii waxaa soo afjaray dagaalkaa guushi RPF ee uu hormuudka u ahaa hogaamiyaha iyo Madaxweynaha Rwanda Qurrba Kagame oo lagu sheege in uu Rwanda ka dhigay dal horay u socda sheekadooduna u fhoof dalalka kale ee Africa in ay ku daydaan Rwanda oo gaartay horumar dhan walba si la mid ah dalaka kale ee sierra Leone iyo Liberia.
Film Cusub Qurba Joogta iyo Qalbi dhoof raba by Hooyga TV.
Hogaamiyaha xumi kuwa ku xeeran ee uu nasteexada badey waxey ka hor joogsadaan inuu dadkiisu la hadlo ama dhageysto si uu u ogaado xaqiiqada dhabta ah ee ay ku nool yahiin bulshada uu xukumo. Macnahiisu waa nidaam gumeysi cusub oo dadban oo ay wadamadii wax gumeysan jiray ilaa iyo hadda u isticmaalaan wadamadii ka xoroobay.
Saa rabaa isku qanciyaa iska sug goor dhaw way baraaruguyee, waxaa la gaaray waqtigay wax fahmi lahaayeenee, hadana ma arko saan saantood, walise waan sugayaa. Duul dhalintiisii tahay tahriibeen yaa umiciina, yaa dalkaan dib uxorayn doona oo dowladnimaduu bari ahaa dib ugu soo celin, yaa u halgamin suu dhibta uga saaro, yaa qalbo baraarujiya oo wax fahamsiin?
Shariif markuu xilka u magacaabay Mudane gaas ayuu yiri: Waxaa aftahannimo eheed, qaababka, hannaannada iyo jaadadka deggan iyo daahiran, ee uu doodda, aragtida iyo qodobbada uu jeedin jiray, una soo gudbin jiray, isaga oo mar joogg adeegsan jiray hadal bannaan yaal ah, oo aan u baahnayn fasir, fahamiisn iyo sharraxaad.
In diran, in daran, in duuban, in duulal qabta, in Dollar Ilaah u yahay, in duminta daw u taqaan, in isku dirka ku diirsata, in kala dirka ku doogsata, in danyarta aan u damqan ayaase kugu dabajirta, dambigii hore aad u gashay iyo gefkii aad Diinaarka ugu ridday xukuumaddii mudane Saacid ayaa adna dacaska kaaga taagan, ee labadiina adiga iyo Xildhibaannada yaa hari doona?!
Kaaga darane, waad yastaa dadkaaga sida dhaqaatiirta iyo aqoonyahanada Soomaalida, oo waxaad qiimo badan u heysaa kuwa shisheeye ood aaminsan tahay in cilmi iyo caqliba loo dhameeyey!
Film made in Melbourne Australia: Director : Siciid Wacaani, actress: Najma
Toloow; Turkigu naga ma tallaabsan! Waa is jiir ka la jaran iyo jiiro is ku jiqan.
Hadana waad hurudaa oo lurba kuma hayo, waadna isla qab weyn tahay oo waxaad isku heysataa qof heybad sare leh. Ujeedku dhiof ahaa inaan Maryan iyo Tarzan la kala reerbin, arrin ay isaga mid yihiin ogeed, oo aan markaa u arkay inaan dadku ku qatalmin, sida hore kuwa badan loogu qaldamay, oo mudane Xasan kow ka yahay.
Breaking down the allocations, the report says that clan elders would select the electoral colleges, which will convene at the regional state capital level with clan elders would then pick electors with consideration for the adequate reflection of sub-clans and districts so that the electoral colleges ultimately represent the districts of Somalia. Waxaa suuro gal ah in la hello nadab iyo Dowladnimo, haddiise Jidka Cadowga, gumeystaha iyo midka Daba-dhiliflahooda aan ku socono waligeen kama baxeyno hoogga iyo halaagga aan ku jirno maanta.
Cumar Eenow oo jeedinaya khudbooyin dhowr ah isla markaana ku hadlaya luqadda af Soomaaliga iyo tan English-ka. Waxaa mudooyinkan jirey guux ballaaran oo looga soo horjeedo habka iyo hannaanku dowladdu u maareysay xubnaha aqalka sare iyo maqaamka Muqdisho oo muran la geliyey. Insaanku wuxuu aadane ku yahay ugana duwan yahay noolaha intiisa kale waa magacyada dhammaantood oo xag alle laga baray iyo siinta aalada caqliga oo gunuda magacyadaas una bedesha luqad dadku isku af-garto ama fahmo.